Kambani Profile - Dongfang Yese-set Equipment Kugadzira Boka Co, Ltd.
Jiangsu Dongfang Yese-yakarongedzwa Midziyo Kugadzira Boka Co, Ltd.
Yakatangwa muna 2000 uye ine yakanyoreswa capital of 118 miriyoni yuan, Jiangsu Dongfang Whole-set Equipment Equipment Co, Ltd. iri kuJingjiang, guta riri muYangtze river nharaunda yekusimudzira hupfumi mudunhu, inotungamirwa neShanghai kusimudzira hupfumi nzvimbo. Tine vashandi makumi matanhatu neshanu, uye takarongedzerwa mukugadzira uye kuisirwa mapaipi emagetsi uye zvirahwe zvezviuno zveindasitiri yepeturu. Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira hydrogen dhizaini ekushandura, imba yekupaza, dzimba dzekugadzirisa, nzvimbo yekushambadzira nzvimbo, marara ekupisira, sarufa acid kudzokorodza maficha, kushandura machubhu, tubular preheater, cast iron plate preheaters, chando rollers, radiant machubhu, nezvimwe.
Isu tinotevedzera kufunga kwekutsva. Takaumba timu yetarenda, uye takashanda nyanzvi dzinozivikanwa nyanzvi uye mapurofesa mu petrochemical uye metallurgisheni maindasitiri. Parizvino, isu tine vashandi vekambani 98 vehunyanzvi hwekugadzirira, kusanganisira 2 mainjiniya epamusoro anonakidzwa nekanzuru yehurumende mubvumidzo, 1 tekinoroji ine musoro wevhezheni, 18 ine musoro wepakati uye 25 ine zita rejunior. Isu tinobatanidza kukosha kukuru kune yunivhesiti-indasitiri kushandira pamwe. Isu takachengeta hwakawanda ruzivo rwekudyidzana nekudyidzana dzimba uye mayunivhesiti (Nanjing Tech University, Jiangsu University, East China University of Science uye Technology, nezvimwewo). An Enterprise technology centre yakagadzirwazve, ichipiwa isu pamusoro pemakumi maviri emapaunzi, zvitatu zvitsva zvekumusoro-zvigadzirwa zvigadzirwa nekuremekedzwa kweHigh Technology Enterprise.
Takamira maneja edu uye takamisa masystems. Takapfuura IS09001-2015 (yemhando system Certification), IS014001-2015 (chitupa system certification) uye OHSAS18001-2007 (yehutano hwekuchengetedza uye kuchengetedza system system certification) uye yekuchengetedza systemization system. Uye zvakare, takapihwa marezenisi ekugadzira eA1 uye A2 kudzvanywa chikepe, giredhi-Yekutambisa kupisa boiler uye giredhi-B boiler, yakakosha michina setifiketi yekushandisa uye ASME welding certification satifiketi.
Makore apfuura aya, isu tinozivikanwa neruzhinji Takawana akati wandei weprovince neyemunyika mibairo, akadai seParamende Management Award Unit muJiangsu Province, AAA Chikwereti Enterprise, nezvimwewo Isu tiri vanopa zvigadzirwa kuChina- uye yepasi-inotungamira mhando uye mabhizinesi, anosanganisira Petro China, Sinopec, CNOOC pamwe ne SEI, HQCEC, East China Engineering Company ye CNPC, SSEC China Chengda Engineering Company, West China Chemical Industry Design Institute, etc. Pamusoro peizvi, isu tiri nhengo yedare renyika makemikari zvigadzirwa dhizaini teukinoroji ino uye imwe yedare remakurukota eSinopec hydrogen kugadzirwa mubatanidzwa.
Isu tinonamatira kune nheyo yemhando yekutanga uye chikwereti zvakanyanya. Isu tinotora tekinoroji nyowani sekutungamira, tichivavarira kupa vatengi vane zvigadzirwa zvepamusoro-mhando zvigadzirwa uye zvinonzwiwa masevhisi. Nehungwaru uye nekuedza kusingafadzi kwevanhu vedu, isu takazvipira mukukura kuva mutengesi anowedzera akasarudzika ezveseti-yakarongedzerwa zvigadzirwa zveindasitiri yemafuta peturu.
Ironworks , Chill Mvura Muchina , Railway Kukurukura , Malo Chikamu cheKuisa , Kuderedza Block , Rail Transit ,